काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको महत्वपूर्ण दिन आज लक्ष्मीपूजा । आज बिहानै घर घरमा कुकुरको पूजाआजा गरी तिहार पर्व मनाएपछि लक्ष्मीपूजा पनि आजै मनाइँदैछ । कुकुर तिहार कात्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन पर्छ । यस पर्वमा कुकुरलाई मीठा मीठा परिकार खान दिएर पुजा गरिने चलन छ । आजका दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ ।
आजका दिन कुकुरको पूजा गरी खानेकुरा खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रुपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास रहेको पाइन्छ ।
वर्षभरि हाम्रो धनसम्पत्ति, तथा घरको सुरक्षा गरेकोमा यस दिन कुकुरलाई पूजेर, माला लगाइदिएर र मीठा खानेकुराहरु दिएर ‘कृतज्ञता’ ज्ञापन गरिन्छ ।
कुकुरलाई पनि यमदूतका रूपमा पुज्ने गरिन्छ । कुकुर यमराजको अर्को प्रियभक्त हो । कुकुरलाई आज्ञापालक एवं रक्षक मात्र मानिँदैन, विभिन्न अपराध गर्ने अपराधीहरू पत्ता लगाउने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि कुकुरले गर्छ ।
कुकुरले घरको रेखदेख तथा चोर–डाँकाबाट बचाउने कार्य गरी मानिसलाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी विपत्ती हुने बेलामा पूर्वसूचना समेत दिन्छ । कुकुरलाई भैरवको बाहन पनि भनिन्छ । त्यसैले हामी कुकुर तिहारमा कुकुरलाई मन पर्ने खाना ख्वाई पूजा गरी मनाउँछौ ।
संस्कृतिविद् भन्छन्, वर्षभरि हाम्रो धनसम्पत्ति, तथा घरको सुरक्षा गरेकोमा यस दिन कुकुरलाई पूजेर, माला लगाइदिएर र मीठा खानेकुराहरु दिएर ‘कृतज्ञता’ ज्ञापन गरिन्छ ।
हामीलाई ढुङ्गे युगबाट उकास्न ‘कृषि’ र ‘पशुपालन’ को ठूलो भूमिका छ । यसरी कृषि, पशुपालन र ती पशुलाई पाल्ने स्थल, तीनै कुरा मानव सभ्यताको आधारभूत पक्ष भएकाले यिनीहरुको पूजा गरिएको हो ।
यस वर्ष पनि लक्ष्मी पूजा पनि यसै दिन परेको छ । गाई तिहारको दिन पर्ने लक्ष्मी पूजा यो वर्ष आज अर्थात् कात्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन परेको छ ।
बेलुकी लक्ष्मी पुजा गरिन्छ । आजका दिन घर वरिपरि सरसफाइ गरी सिङ्गारेर बत्तीले झिलिमिली पारी लक्ष्मी पूजा गरेमा लक्ष्मीले सधैँ बास गर्छिन् र ऐश्वर्य प्रदान गर्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ ।
यसै विश्वासका कारण आज घर-घरमा दीपमालिकासहित दीपावली गरिन्छ ।
तिहारमा लक्ष्मीमातालाई खुशी पार्न चढाउनुहोस् यी पाँच चीज
तिहार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको दशैँ पछिको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो । यो पर्व कार्त्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले शुरु भएर कार्त्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटीकासम्म (पाँच दिन) मनाइन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । तर यस वर्ष भने लक्ष्मी पुजा र कुकुर तिहार एकै दिन परेको छ ।
हिन्दू धर्मावलम्वीले दीपावली (दिवाली)को रुपमा यस पर्वलाई धूमधामसाथ मनाउँछन् । यस पर्वको नाम हिन्दी शब्दको ‘त्योहार’ शब्दबाट विकृत हुँदै तिहार बनेको अनुमान लगाइन्छ। यसलाई दीपावली अनि दिवाली नामले पनि चिनिन्छ । यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिएको छ । यही दिन भगवान् धन्वन्तरीको जन्म भएको हुनाले यसलाई धन्वन्तरी जयन्ती वा धनतरेस पनि भनिन्छ ।
यसै दिन साँझमा घरको मूलद्वारको सामु यमराजलाई दीपदान गर्नाले मृत्युदेव प्रसन्न भई आरोग्यता तथा दीर्घजीवन प्रदान गर्छन् भन्ने विश्वास छ । त्यो घरमा कहिल्यै पनि ‘अपमृत्यु’ वा ‘अल्पमृत्यु’ हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यमपञ्चकमा क्रमशः काग, कुकुर, गाई, लक्ष्मी, गोवर्धन र भाइ पूजा गरिन्छ । पिङ खेल्ने, दीपावली गर्ने र देउसीभैलो खेल्दै सेलरोटी आदि मिष्ठान्न खाई रमाइलो गरी तिहार मनाउने गरिन्छ ।
यस वर्ष लक्ष्मी पूजा कार्तिक २९ गते शनिवार परेको छ । यो दिन लक्ष्मीपूजाको विधि अनुसार पूजा गर्नाले घरको गरिबी हट्ने घरमा सुख शान्ति छाउने भन्ने मान्यता छ । लक्ष्मीमातालाई खुशी बनाउन लक्ष्मी पूजाको दिन यस्ता चीज चढाउनाले मनो इच्छा पूरा हुने विश्वास छ ।
१. लक्ष्मी पूजाको दिन बिहान चाडै उठ्नुहोस् । उठिसकेपछि लक्ष्मी मन्दिर गएर राम्रो केहि वस्त्र र गुलाबको फूल चढाउनुहोस्।
२. लक्ष्मी पूजाको दिन बिहान उखु ल्याउनुहोस् र साँझ लक्ष्मीपुजा गर्ने क्रममा चढाउनुहोस्।
३. लक्ष्मी पूजाको रात लक्ष्मी पूजा गर्दा नौ गोमती चक्र राख्नुहोस्। पूजा सकिएपछि चक्रलाई आफ्नो दराजमा राख्नुहोस्।
४. पूजाको साँझमा गरिब व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा भोजन र सकेको दान दिनुहोस्। विशेष पूजामा यो उपाय गर्नुहोस्।
५. यस रात पाँच साबुत सुपाडी ,कालो बेसार, पाँच पहेलो कौडी पनि राख्नुहोस्। पूजा पछि सबैलाई लगेर आफ्नो दराजमा राख्नुहोस्।
यसो गर्दा लक्ष्मी प्रसन्न हुने सो घरमा सदा लक्ष्मीले बास गर्ने विश्वास छ । लक्ष्मी पूजा गरिसकेपछि मध्यरातमा महिलाले आँगनबाट भित्रसम्म दुःख, दरिद्र हटी सुखशान्ति भित्रियोस्, लक्ष्मी स्थिर भइरहुन् भन्ने उद्देश्यले नाङ्लो ठटाउँदै प्रवेश गर्ने शास्त्रीय विधि गर्ने चलन रहिआएको छ ।